ချောင်းမငယ်ရေလှောင်တမံအတွင်း ရေပေါ်လှောင်အိမ်ဖြင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ပြသ – Agri Digit News
ချောင်းမငယ်ရေလှောင်တမံအတွင်း ရေပေါ်လှောင်အိမ်ဖြင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ပြသ
Posted on Author adminComments Off on ချောင်းမငယ်ရေလှောင်တမံအတွင်း ရေပေါ်လှောင်အိမ်ဖြင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ပြသ
ငါးသယံဇာတများ ပြုန်းတီးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေး နှင့် ရေရှည်တည်တံခိုင်မြဲသည့် ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စေရန် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေကြပြီး ဆည်မြောင်းတာတမံများ နှင့် အခြေအနေပေးသော ရေပြင်များတွင် လှောင်အိမ်စနစ်ဖြင့် ငါးမွေးမြူခြင်းကို ယနေ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒေသနေ ပြည်သူများ စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့် စတင်မိတ် ဆက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ချောင်းမငယ် ရေလှောင်တမံ ၌ ရှေ့ပြေးစံပြ ဆောင်ရွက်ပြသသည့် ရေပေါ်လှောင်အိမ်စနစ်ဖြင့် ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းခွင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး က တာဝန်ရှိသူများအား ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။ ရှေးဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကြီး နှင့် တာဝန်ရှိသူများ က ချောင်းမငယ် ရေလှောင်တမံ အတွင်းရှိ ရေပေါ်လှောင်အိမ် အတွင်းသို့ တီလားပီးယားငါးသားပေါက် ကောင်ရေ ၃၀၀၀ အား မျိုးစိုက်ထည့်ပေးခဲ့သည်။
ရေလှောင်ကန်၊ ရေကန်ကြီးများ၊ မြစ် နှင့် ချောင်းကျယ်များ တွင် ပိုက်လှောင်အိမ် စနစ်ဖြင့် ရေချိုရေပြင်၌ ငါးမွေးမြူခြင်းသည် မြေကန်တူးမွေးမြူခြင်းကဲ့သို့ ကုန်ကျစရိတ် မများပဲ ငါးများ ပြန်လည် ဖမ်းဆီး ရာတွင်လည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မွေးမြူ ထားသောငါးများကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ရန် လွယ်ကူခြင်း၊ လုပ်သားအင်အား လိုအပ်ချက် နည်းခြင်း၊ တစ်ယူနစ် ဧရိယာအတွင်း ငါးထွက်ကုန်ပမာဏမြင့်မားခြင်း စသော အကျိုး ကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သဘာဝရေပြင်၌ ရေပေါ်လှောင်အိမ်ဖြင့် ငါးမွေးမြူရန်နေရာရွေးချယ်ရာတွင် ရေအရည် အသွေး၊ ရေအနက် နှင့်ရေစီးနှုန်းများကို ထည့်သွင်း တွက်ချက်ရန် လိုအပ်ပြီး ရေကြောင်း သွားလာမှုရှိသည့် နေရာဒေသဖြစ်ပါက ရေကြောင်းသွားလာရေးကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမဖြစ်စေရေး ဂရုပြုရန်လိုအပ် ကြောင်းသိရသည်။
ထို့နောက် တာဝန်ရှိသူများက သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများ အလိုက် ချောင်းမငယ် ရေလှောင် တမံဝန်းကျင် သာယာလှပရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများ နှင့် Agroecological Project အစီအစဉ်ဖြင့် အကောင် အထည် ဖေါ်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာများကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြရာ ဒုတိယဝန်ကြီးက ချောင်းမငယ်ရေလှောင်တမံ ဝန်းကျင်ရှိ ဒေသခံများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ချက်များကို လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း နှင့်အတူ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများကို တပါးတည်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် ချက်များ ကိုလည်းကောင်း ဆွေးနွေး မှာကြားပြီး Agroecological Project အစီအစဉ်ဖြင့် အကောင် အထည် ဖေါ် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် ကျော်ဖီစိုက်ခင်း နှင့် တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်ခင်းများကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။ ထိုမှတဆင့် ဒုတိယဝန်ကြီး နှင့် အဖွဲ့သည် ပျဉ်းမနား စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်း သို့ ရောက်ရှိကြပြီး အသစ်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်မည့် မွေးမြူရေး ဒီပလိုမာသင်တန်းအတွက် တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးခြံများ ၊ စာသင်ဆောင်များနှင့် လက်တွေ့ဆောင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာ သင်တန်းများနှင့် မွေးမြူရေးဒီပလိုမာ သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူများအား သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူထား ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၊ တက်ရောက် လိုသူများအနေဖြင့် နေပြည်တော်(ပျဉ်းမနား)၊ သထုံ၊ မြောင်းမြ၊ ရွှေဘို၊ ပုသိမ်ကြီး၊ ပွင့်ဖြူ၊ သာယာဝတီ၊ ထားဝယ်၊ ဟဲဟိုး၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဒီးမောဆို၊ ဇွဲကပင် (ဘားအံ)၊ လုံပီး(ဖလမ်း)၊ ကျောက်တော်၊ ဟုမ္မလင်းမြိူ့များရှိ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ ကျောင်းများတွင် လျှောက်ထား နိုင်ကြကြောင်း၊ မွေးမြူရေးဒီပလိုမာ သင်တန်း တက်ရောက် လိုသူများသည် လတ်တလောတွင် နေပြည်တော် (ပျဉ်းမနား) ၊ ပုသိမ်ကြီး၊ ဟဲဟိုး စိုက်ပျိုးရေး သိပ္ပံကျောင်းများ ၌ လျှောက်ထား နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကျန်ရှိသည့် စိုက်ပျိုးရေး သိပ္ပံ ကျောင်းများ၌ မွေးမြူရေး ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီပလိုမာ သင်တန်း သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများသည် (၃)နှစ်သင်တန်း တက်ရောက် ရမည် ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ဒီပလိုမာထူးချွန် သူသည် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် သို့လည်းကောင်း၊ မွေးမြူရေး ဒီပလိုမာ ထူးချွန်သူသည် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် (B.A.Sc) သင်တန်း သို့ လည်းကောင်း တက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ သည် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွါတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes အား Video Call အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်၍ မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှု ၊ “မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်မြင့်လားလာရေးလုပ်ငန်းများ” စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတို့ အား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တိရစ္ဆာန်အစာပင် ပြောင်းစိုက်ခင်း ရိတ်သိမ်းခြင်း နှင့် ပြောင်းချဉ်ဖတ် ပြုလုပ်ခြင်း သရုပ်ပြပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ(ည ၈နာရီ သတင်း)
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ(မွမ်းမံ)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁) ဝန်ထမ်း(၃)ရက် သင်တန်းဖွင့်လှစ်